क्रिकेट मैदानका लागि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनलाई जग्गा दिने घोषणा !
फाउण्डेसनले क्रिकेट मैदानका लागि जग्गा खोजी गरिरहेकाबेला महानगर प्रमुख रेणु दाहालले भरतपुर महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको हो । “भरतपुर महानगर सबै सम्भावना भएको क्षेत्र हो, रेणु दाहालले आज यहाँ पत्रकारसँग भन्नुभयो, क्रिकेटका लागि चितवन आउन आह्वान गर्छु, महानगरले सक्दो सहयोग गर्छ ।”
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले प्रदेशन नं ३ का विभिन्न क्षेत्रमा रंगशालाका लागि जग्गा खोजी गरिरहेको थियो । महानगर प्रमुख दाहालले पश्चिम चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २० मा निर्माण हुँदै गरेको रंगशालाको मैदान उपलब्ध गराउन महानगर तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले आवश्यक पर्ने आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्नसमेत तयार छ भन्दै आजै बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन गरेर फाउण्डेसनलाई पत्राचार गरिने उल्लेख गर्नुभयो । चित्रवन रंगशाला भएको ठाउँमा क्षेत्र विस्तार गरेर क्रिकेट रंगशाला बनाउन सकिने महानगर प्रमुख दाहालको भनाइ थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन प्याकेज घोषणाका क्रममा उक्त रंगशालाका लागि रु ५० लाख विनियोजन गर्नुभएको थियो । त्यसमा रु १९ लाखमात्रै खर्च भएको र अरु रकम फर्किएको थियो । अहिले भरतपुर महानगरले उक्त रंगशालाका लागि रु एक करोड बजेट छुट्याएको जनाएको छ ।
प्रकाशित : सोमबार, चैत १९, २०७४१४:३९
पत्रकारको यस्तो प्रश्नमा जब प्रचण्डले भने, “यो वाहियात कुरा हो, जवाफ दिन चाहन्न ।”
संसदमा काँग्रेस संसादहरुले यस्तो प्रश्न उठाएपछी तत्काल अर्थमन्त्री खतिवडाले दिए जवाफ
जंगी अड्डामा प्रधानमन्त्री ओली: नेपाली सेनालाई सुदृढ एवं थप क्षमतावान् बनाइने
(नेकपा) छोडेर विप्लव माओवादी बन्नेहरुको संख्या ह्वातै बढ्यो ! के गर्लान् केपी र प्रचण्ड ?
समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट कार्य अन्तिम चरणमा, के गर्दैछ अायाेग ?
राष्ट्रियसभा उम्मेदवार छान्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई,गार्हो पर्ने भयो प्रचण्ड सहित शीर्ष नेतृत्वलाई
३० सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका